अर्थमन्त्रीको जस्ता समाचार कति आउँछन् कति, बोल्न जरुरी छैन : देव गुरुङ [अन्तर्वार्ता] - NepalWatch
Previous News २०७९ जेठ २० गते १३:०७
म पुनः मेयर हुनु मेरोभन्दा भरतपुरको आवश्यकता हो : रेनु दाहाल
Next News २०७९ असार २ गते १३:०७
नेपालवाच २०७९ जेठ ३१ गते १३:०७
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९\_८० को बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नै कार्यकक्षमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यराति प्रवेश गराई करको दायरासहित राजश्वका विषयमा चलखेल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले बजेट निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा असम्बन्धित व्यक्तिबाट राजश्वमा चलखेल गर्नु राष्ट्रघात भएको आरोप लगाएका छन् ।
यस विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मन्त्री शर्मालाई आइतबार अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै निवासमा बोलाई छलफल गरेका थिए । पार्टीभित्रै केही नेताहरूले मन्त्री शर्मालाई फिर्ता बोलाउन प्रचण्डलाई दबाब दिएका छन् ।
पार्टीले औपचारिक रूपमा यस विषयमा केही बोलेको छैन । यसै विषयमा माओवादीका नेता देव गुरुङसँग नेपालवाचले पार्टीको आधिकारिक धारणाबारे प्रश्न गरेको छ ।
बजेट निर्माणको क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीले आफ्नै कार्यकक्षमा प्रवेश गराई राजश्वमा चलखेल गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । यसमा पार्टीको आधिकारीक धारणा के हो ?
यो पार्टीले थाहा पाउने विषय परेन ।
पार्टीलाई थाहा नभए कसलाई थाहा हुन्छ ?
त्यो अर्थमन्त्रालयलाई सोध्नोस् ।
पार्टीको धारणा चाहिँ के हो ?
प्रचण्डसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो क्यारे उहाँसँग सोध्नोस् ।
यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ?
त्यस्ता बनिबनाउ समाचार कति आउँछन्, कति ? कतैबाट पुष्टि भएको छैन । पुष्टि भयो भने छलफल हुन्छ । मिडियामा आउने समाचारको पछाडि लागेर हुँदैन ।
भ्रम वा यर्थाथबारे पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ?
मिडियाले उठाएका विषयमा सबै कुरा बोलिराख्नु जरूरत छैन । आधिकारिक पुष्टि हुनुपर्छ । पुष्टि नभएको विषयमा पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यतिकै हचुवा तालले हल्काफुल्का ढंगले पार्टी बोल्ने कुरा आउँदैन ।
अर्को विषय एसिया प्रशान्त हेर्ने अमेरिकी सेनाका प्रमुखसहितको टोलीले नेपालको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन्, यसमा पार्टीको धारणा के हो ?
यो विषय रक्षा वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोध्ने विषय हो ।
माओवादीको आधिकारिक धारणा के हो ?
रक्षा वा परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक विषय प्रष्ट गरेको भए पो पार्टीले धारणा बनाउने हो । यस विषयमा सरकारले पनि केही बोलेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भेटेर गएका छन्, यस्ता विषयमा जिम्मेवार पार्टी जवाफदेही हुनुपर्दैन ?
आधिकारिक विषय नै प्रष्ट भएको छैन । त्यस्ता केही नयाँ कुरा आयो भने सोच्ने कुरा भयो । भ्रमण भयो भनेको छ । नयाँ तथ्य केही आएको छैन । आउने जाने त गरिराखेकै छन् । सम्बन्धित निकायले आधिकारिक कुनै जानकारी नदिएकाले बोल्न हतार हुन्छ ।
पोखराले कोल्टो फेर्ने योजनाका साथ काम गर्नेछौँ : प्रमुख आचार्य
एमालेमा यो अचम्मको कुरा छ : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]